रहिनन् सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्याल, हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! – सडक मिडिया
रहिनन् सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्याल, हार्दिक श्रद्धाञ्जलि !
सडक मिडिया July 1, 2020 0
समानुपातिक सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको मृ’त्यु भएको छ। काठमाडौंस्थित शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचाररत ६६ वर्षीया छन्त्यालको बुधबार निधन भएको हो।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएकि छन्त्याल संसदको कृषि, सहकारी, वातावरण र पशुपंक्षि समितिमा सदस्य थिइन्। उनकाे अन्त्येष्टि अाजै दिउसाे हुने कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिकाकी छन्त्यालका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। नेपाल महिला संघबाट राजनीति थालेकी उनी संविधानसभा सदस्य पनि थिइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्याल (६६)को उपचारका क्रममा गंगालाल राष्ट्रिय ह्रदय रोग केन्द्रमा निधन भएको खबरले दु:खी छु । उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु ।
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) July 1, 2020
Previous Post: पार्टीभित्रैबाट राजीनामा मागेर आफूलाई अपमान गरेकाे प्रधानमन्त्रीकाे आ’रोप
Next Post: भारतमा भयानक बन्दै कोरोना: झण्डै ६ लाख पुगे संक्रमित, एकदि यति धेरैकाे मृत्यु
दाङपछि काठमाण्डौंमा फेसवुक लाइभ गरेर युवतीले गरिन दे’हत्याग (भिडियो ) 5,245 views
अर्का अभिनेताले पनि रोजे सुशान्तको बाटो…हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! 5,089 views
सुशान्तको अन्तिम फिल्ममाथि आइपर्यो ठुलो आपत….. 4,729 views
नेपालमा न्युज च्यानल बन्द भएपछि भारतीय मिडियामा खैलाबैला, कसले के लेखे? पढ्नुहोस 2,735 views